SUPERTOTOBET0120 İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ! - RESTBET501.COM GİRİŞ
SUPERTOTOBET0120 İŞTE FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ!
အဝါရောင်နှင့်ရေတပ်အပြာရောင်ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုဘောလုံးအသင်းကိုအပြောင်းအရွှေ့အသစ်ကအဝါရောင်အသင်းကို ၀ င်ရောက်ကစားခွင့်ရတာကို ၀ မ်းသာကြောင်း၊ ဂျာမနီရဲ့ Wolfsburg အသင်းကပါ ၀ င်ခဲ့တဲ့အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်လူငယ်နောက်ခံလူFenerbahçe Can Bartu ဌာနရှိစာနယ်ဇင်းသမားများကိုဒီအဝါရောင် – အပြာအပြာအသင်းနှင့်ပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးနောက်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Tisserand, Fenerbahçeသို့ပြောင်းရွေ့ခြင်းကိုကျေနပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ Tisserand “ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအလှူငွေပေးချင်ပါတယ်။ သူဟာFenerbahçeလိုကလပ်အသင်းကြီးမှကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါသူငြင်းဆန်ဖို့အခက်တွေ့ပါတယ်။ သူကဒီမှာယူလာခြင်းအားဖြင့်အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်။ “
သူသည်အသင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အချိန်လိုအပ်သည်ကိုအလေးအနက် ထား၍ Marcel Tisserand “ကစားသမားကောင်းများFenerbahçeကိုဖြတ်သန်းသွားခဲ့သည်။ ငါသူတို့လမ်းကိုသွားချင်တယ်။ အတွဲလိုက်တိုက်ခိုက်ရတာကိုကြိုက်တယ်။ ငါဟာဘောလုံးနဲ့ကစားချင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပဲ။ ငါအသင်းကိုကူညီချင်တယ်။ ။
တူရကီရှိဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုကစားသမားများကိုလွှဲပြောင်းပေးသည့်အမြင်ဖြင့်ကစားသမားများစွာ ၀ တ်ဆင်ထားသောယူနီဖောင်းတွင်အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ငန်းစဉ် “အန်လိုကာ၏ကြီးမားသောပန်ကာ။ နစကာနှင့်ငါစကားပြောခဲ့သည်။ ငါသူငယ်ချင်းများစွာနှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ ဤနေရာနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲပြောစရာစကားကောင်းများရှိသည်။ ကျနော်တို့က Luyindama နဲ့အတူ National team မှာကစားတယ်။ ဒီမှာငါ့ပြိုင်ဘက်ပါ။ လူတိုင်းကကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်ကြတယ်။ ငါတို့ဟာကွင်းပြင်မှာပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ပေမဲ့ကွင်းပြင်အပြင်ဘက်မှာသူငယ်ချင်းကောင်းတွေရှိတယ်။ “
Marcel Tisserand သည်သူ၏ပထမဆုံးလေ့ကျင့်မှုမတိုင်မီလယ်ကွင်း၌သူ၏အသင်းဖော်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာကကြိုဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်ပြီးတိုက်ခိုက်ရန်အသင့်ရှိကြောင်းကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ချန်ပီယံအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူပြောခဲ့တယ်။
RESTBET501 İŞTE FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ! BETPAS423 İŞTE FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ! SUPERTOTOBET0120 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” SUPERTOTOBET0120 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ SUPERTOTOBET0120 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ SUPERTOTOBET0120 SERGEN YALÇIN NİKOLA KALİNİC’İ BEKLİYOR SUPERTOTOBET0120 GALATASARAY’DA FLAŞ MUSLERA KARARI! RESTBET501.COM YENİ OYUNLAR SUPERTOTOBET0120 GALATASARAY’DA FLAŞ MUSLERA KARARI! SUPERTOTOBET0120 ABDURRAHİM ALBAYRAK İSYAN ETTİ!
13 Comments on SUPERTOTOBET0120 İŞTE FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ!
BERNA November 26, 2020 at 5:20 pm
DİLEK November 27, 2020 at 10:50 am
CANER November 28, 2020 at 2:10 am
ZAFER November 28, 2020 at 5:30 am
UĞURAY November 28, 2020 at 9:10 pm
KÜBRA November 29, 2020 at 5:50 am
ENGİN November 30, 2020 at 6:30 am
ELİF December 2, 2020 at 9:20 am
KUDRET December 2, 2020 at 12:50 pm
HASAN December 2, 2020 at 7:00 pm
ÖMER December 4, 2020 at 7:10 pm
SEDA December 6, 2020 at 11:00 am
ABDURRAHMAN FUAT December 8, 2020 at 10:00 pm